Kusho ukuthini ubucwebe beplatinamu eCambodia? - Ukuhlaziywa kwesayensi
Ngokwalokho esikuphawulile esifundweni sethu, azikho izinto zokuhloba ze-platinum zangempela eCambodia. Abantu baseCambodia basebenzisa kabi igama elithi "Platinum" noma "Platine" ukuchaza ingxubevange yensimbi equkethe iphesenti elithile legolide.
Sithenge ubucwebe beplatinamu emadolobheni ahlukahlukene kanye nezinhlobo eziningana zezitolo ukuthola ngokunembile ukuthi iyini le nsimbi. Silalele futhi nomthengisi ngamunye ukuze aqonde izincazelo zabo, futhi nansi imiphumela esiyitholile.
Izibalo esizinikezayo ziyizilinganiso futhi imininingwane inembe kakhulu ngangokunokwenzeka. Kodwa-ke, imiphumela yophenyo lwethu ayihambelani nayo yonke imiphumela yabo bonke ubucwebe, kungaba khona okuhlukile.
Kuyini iplatinamu yangempela?
Iplatinamu eyi-Standart (inombolo 3)
Inombolo yePlatinamu i-5 ne-7
Inombolo yeplatinamu 10
Inzuzo kanye nokubi kwabasebenza ubucwebe
Usizo nokubi kumakhasimende
Iplatinamu yangempela iyinsimbi emhlophe, ebomvu, futhi ebulalayo, i-iron-white iron. IPlatinamu iyicucu kakhulu kunegolide, isiliva noma ithusi, ngakho-ke iyi-ductile ebaluleke kakhulu yensimbi emsulwa, kodwa ayilimalanga kunegolide.
IPlatinamu iyinto yamakhemikhali enophawu lwe-Pt nenombolo ye-athomu 78.
Kuze kube manje, asikaze sithole ubucwebe be-platinum bangempela kunoma yisiphi isitolo sobucwebe eCambodia. Kepha lokho akusho ukuthi akunakwenzeka ukuthola
IGolide vs Platinamu
Abantu baseCambodia basebenzisa igama elithi "Meas" kuphela ukukhuluma ngegolide elimsulwa. Kepha igolide elimsulwa lithambile kakhulu ekusetshenzisweni kobucwebe.
Uma itshe eliyigugu lenziwe ngokuhlanganiswa kwe-alloy yegolide nezinye izinsimbi, akubhekwa njenge- “Meas”, kodwa njenge- “platinum”.
Akekho owaziyo umsuka wangempela wokusetshenziswa kwegama elithi "Platine", kodwa sicabanga ukuthi lisuselwa egameni lesiFulentshi elithi "Plaqué" noma igama lesiNgisi "Plated", okusho ukuthi ubucwebe eCambodia buhlanganiswe ngensimbi eyigugu , ngenkathi kukhona insimbi eshibhile ngaphakathi. Sicabanga ukuthi incazelo yayishintshile ngokuhamba kwesikhathi.
Empeleni, abaphenyi basebenzisa igama lomdabu waseFrance elithi “Chromé” ukukhuluma ngobucwebe obugqokiwe.
Ukulalela izincazelo zabathengisi, iplatinamu ejwayelekile yinombolo yeplatinamu 3. Okusho ukuthi i-3 / 10 yegolide, noma i-30% yegolide, noma i-300 / 1000 yegolide.
Eqinisweni, zonke izivivinyo zethu ziholele ukuthi kunegolide elingaphansi kwe-30% kulawa ma-jewelry, njengoba ubona ngezansi, okujwayelekile ngu-25.73%. Lokhu kungahluka ngamaphesenti ambalwa phakathi kwezitolo ezahlukahlukene, futhi ngokuvamile amaphesenti ahlukahluka ubucwebe esitolo esisodwa.
Kuhlolwa yi: Energy Disparive X-Ray Fluorescence (EDXRF)
Uma siqhathanisa lezi zinombolo namazinga wamazwe omhlaba, kusho ukuthi yigolide le-6K noma i-250 / 1000 yegolide
Leli khwalithi lensimbi alikho kwamanye amazwe, ngoba inani eliphansi legolide elisetshenziswe njengamazwe omhlaba yi-37.5% noma i-9K noma i-375 / 1000.
Ukulalela izincazelo zabathengisi:
Inombolo yePlatinamu i-5 kufanele isho i-5 / 10 yegolide, noma i-50%, noma i-500 / 1000.
Inombolo yePlatinamu i-7 kufanele isho i-7 / 10 yegolide, noma i-70%, noma i-700 / 1000.
Kepha umphumela uhlukile
Kwenombolo 5, imiphumela incane kunalokho obekufanele ibe yiyo, kepha kuyamukeleka, noma kunjalo, umehluko ucacile ngenombolo 7.
Amaphesenti egolide ayalingana phakathi kwenombolo 5 ne-7, kepha umbala wensimbi uhlukile. Ngempela, ngokushintsha ubukhulu bethusi, isiliva ne-zinc, umbala wokushintsha kwensimbi.
Izidingo ziphansi ngenombolo ye-platinamu 5 ne-7. Ubucwebe abuthengiswa njengemikhiqizo esezingeni elifanele eCambodia. Ngokuvamile kudingeka kakhulu uku-oda ukuze abasebenza ubucwebe baklame ijelali ikakhulukazi ikhasimende.
Inombolo yePlatinamu i-10 iyigolide elicwengekileyo, ngoba kufanele kube yi-10 / 10 yegolide, noma i-100% yegolide, noma i-1000 / 1000 yegolide.
Kepha empeleni, inombolo ye-platinum engu-10 ayikho, ngoba uma kunjalo, igolide elimsulwa libizwa ngokuthi “iMeas”.
ICambodiya kanye namazinga aphesheya
Uma kuqhathaniswa namazinga wamazwe omhlaba, iplatinamu yaseCambodian iqhathaniswa negolide elibomvu. I-alloy iqukethe inqwaba yethusi. Futhi kuyindlela eshibhile yokwenza igolide, ngoba ithusi ishibhile kakhulu kunezinye izinsimbi ezisetshenziswa kuma-alloys egolide.
Igolide eliphuzi lendinganiso yomhlaba wonke liqukethe ithusi elingatheni kepha liningi kakhulu kunesiliva elibomvu.
Igolide leRose lingumlamuli phakathi kwegolide eliphuzi negolide elibomvu, ngakho liqukethe ithusi eliningi kunegolide eliphuzi, kepha ithusi elingaphansi kunegolide elibomvu.
Imininingwane elandelayo ingahlukahluka kuye ngesitolo.
Kubukeka sengathi abanye ubucwebe baseCambodian bayazi ukuthi ama-alloys abo awekho sezingeni elibi nokuthi kukhona namazinga aphesheya.
Sizwe nge "Meas Barang", "Meas Italy", "Platine 18" ..
Onke la magama angaba nezincazelo ezihlukile. Futhi abathengisi ngamunye unencazelo ehlukile.
"Meas Barang" kusho igolide langaphandle
"Meas Italy" kusho igolide lase-Italy
“IPlatine 18” isho igolide elingu-18K
Kepha kulokhu esikuzwile, lawa magama kwesinye isikhathi achaza ikhwalithi yensimbi, kwesinye isikhathi ikhwalithi yomsebenzi wobucwebe. Ngokuqondene nenombolo ye-platinum engu-18, akunangqondo uma kuqhathaniswa nezinye izinombolo ngoba kungasho ukuthi ingu-180% wegolide elimsulwa.
Ukuhweba ngobucwebe bePlatinamu
Uhlelo lwamabhange lusha eCambodia. Abantu baseCambodiya ngokwesiko batshala imali yabo kwizakhiwo ezithengiswayo njengokutshala imali isikhathi eside. Futhi bathenga ubucwebe njengezikhathi ezimfushane noma eziphakathi nendawo ukuze bagweme ukusebenzisa imali yabo ngokungadingekile.
Vele, iningi labantu alinaso isabelomali sokutshala imali kunoma yini, kepha lapho nje sebenemali encane elondoloziwe, bathenga i-platinum bangle, umgexo noma iringi.
Imvamisa, umndeni ngamunye ungena esitolo esifanayo ngoba wethemba umnikazi wawo.
Iningi labantu aliqondi ukuthi lithengani kepha alinandaba ngoba imininingwane emibili kuphela abafuna ukuyazi yile:
Ngabe ubucwebe buzothenga ubucwebe obungakanani lapho bezodinga imali?
Ngokwesilinganiso, ubucwebe buthenga ubucwebe beplatinamu obujwayelekile cishe nge-85% yentengo yabo yoqobo. Lokhu kungahluka ngesitolo
Ikhasimende nje kufanele libuyise ubucwebe nge-invoice ukuze likhokhwe ngokushesha ngokheshi.
Kuyinto utshalomali omuhle. Kulula ukuthola amahlandla ambalwa imali entweni efanayo
Amakhasimende athembekile ngoba awakwazi ukuthengisa ubucwebe bawo kwesinye isitolo eCambodia
Udinga imali eningi esandleni ukuthenga ubucwebe bamakhasimende. Kuyingozi futhi kungaheha amasela. Ikakhulukazi ngaphambi kwamaholide, lapho wonke amakhasimende eza ngasikhathi sinye ngoba adinga imali yokuya esifundazweni sawo.
Umsebenzi onzima futhi wansuku zonke ngoba umphathi kufanele aphathe isitolo eyedwa. Azikho izisebenzi ezifanele lo msebenzi
Kulula ukubuyisa imali
Akudingeki ube yisazi
Ulahlekelwa yimali uma uyithengisela emuva
Uma ulahlekelwa yimali, ulahlekelwe yikho konke
Awukwazi ukuyithengisa uyibuyisele kwesinye isitolo
Konke kuhamba kahle inqobo nje uma isitolo sivuliwe. Kepha uma isitolo sivalwa, kuzokwenzekani ngokulandelayo?
Ungayithenga kuphi iplatinamu yeKhmer?
Uzokuthola yonke indawo, kunoma iyiphi imakethe kunoma iyiphi idolobha eMbusweni waseCambodia.
Siyayithengisa i-planethi yeKhmer?
Sithengisa kuphela amatshe ayigugu emvelo nezinsimbi eziyigugu eziqinisekiswe kumazinga omhlaba.
Siphinde sinikele ukuklama nokwenza ubucwebe bakho obuyisiko kunoma iyiphi insimbi eyigugu, futhi yanoma yiliphi ikhwalithi, kufaka nePlatinamu yangempela.
Siyethemba ukuthi ukufunda kwethu kube wusizo kuwe.
Ngibheke ukuhlangana nawe esitolo sethu kungekudala.